मनकामना केबुलकार भोलिदेखि बन्द हुने ! कहिलेसम्म ? पूरा हेर्नुहोस्….. – SUDUR MEDIA
December 28, 2020 AdminLeaveaComment on मनकामना केबुलकार भोलिदेखि बन्द हुने ! कहिलेसम्म ? पूरा हेर्नुहोस्…..
मनकामना केबुलकार सेवा बन्द हुने भएको छ । नियमित मर्मतसम्भारका लागि छ दिन बन्द गरिने भएको हो । यही पुस १४ गतेदेखि पुस २० गतेसम्म बन्द गरिने मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।